Tuesday March 27, 2018 - 09:58:23 in Wararka by Super Admin
Afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, Sheykh Cali Maxamuud Raage ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyey Idaacadda Islaamiga Andalus kaga hadlay dhul boobka ay dowlada Kenya ka biloowday degmada Balad-Xaawo iyo kacdoonka ay sameynayaan dadweynaha M
Sheekh Cali dheere ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Beled Xaawo ugu baaqay in ay u kacaan sidii looga hortagi lahaa duullaankaasi ujeedkiisu yahay in laboobo dhulalka shacabka Soomaaliyeed.
Sheekh Cali dheere ayaa sheegay in talaabadan aysan ahayn mid ugub ah islamarkaana ay dowladda Kenya horay u heysatay dhul ballaaran oo ay leeyihiin Muslimiinta balse talaabadan ay tahay qorshe cusub oo ay dooneyso in ay ku qabsato deegaanada kale ee ka madax banaan gummeysigooda.
"Dadweynaha Reer Balad-Xaawo ayaa sameeyey mudaaharaadyo ballaaran oo ay kaa soo horjeedaan dhul boobka gaalada Kenya, waxayna dhowr jeer weerareen shaqaalaha iyo ilaalada darbiga si ay u difaacaan dhulkooda iyo guryahooda balse maleeshiyaatka ridada ee maamulka Axmad Madoobe ee dabadhilifka u ah gaalada Kenya ayaa rasaas ku kala ceyriyey dadkaas, una awood sheegtay, iyagoona mam-nuucay dibadbaxyada ka dhanka ah saliibiyiinta Kenya" ayuu yiri Sheekh Cali Dheere.
Mar arintan wax laga weydiiyey sababta keentay in maleeshiyaatkan ay handadaan dadweynaha, kagana hiiliyaan Kenya ayuu sheegay in maleeshiyadkan markii hore ay soo abaabushay dowlada Kenya si ay uga shaqeeyaan danaha gumeystaha Kenyaatiga, ayna yihiin addoomo qaadanaya amarada mudanayaashooda Kenya.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu dadweynaha Muslimiinta Balad-Xaawo ugu baaqay inay sugnaadaan, siina wadaan kacdoonka ka dhanka ah gaalada Kenya ee qabsatay dhulkooda.
Dowlada daalimadda ah ee Kenya oo sanadkii la soo dhaafay bilowday dhismaha darbi dheer oo ay ku dhiririneyso xad-beenaadka kala qeybiya Kenya iyo Soomaaliya, Waxaana intii lagu gudajiray dhismaha darbigaas ay leexsatay dhul ballaaran oo ay leeyihiin muslimiinta Soomaaliya kuwaas oo ay ku darsatay deegaanadii ay horay u gumeysan jirtay.
Waa dhul boob aanan ku koobneyn kaliya magaalada Balad-Xaawo oo saameyn doono dhul gaaraya 700 KM oo ka soo bilaabayana xeebaha Ras Kambooni ilaa magaalada balad-Xaawo, waxaana haddii ay dowlada Kenya u hirgasho talaabadan ay sidaas kula wareegi doontaa dhul horleh oo ku biiri doona deegaanada ay hadda gumeysato
Halkan ka degso Wareysiga Sh.Cali dheere ama Hoos Ka dhageyso